Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Guqulela UTM uhlela yokuhlala Excel
AutoCAD-AutoDeskIiphotographyUkulandaGoogle umhlaba / imephu
Kulungelelwaniso lwejografi, oku kuya kuba Yinde= -8 ° -5 '-59 ” , lat= 19 ° 24 ' 18 ”, (ukubonisa igridi kuGoogle Earth, yenza “jonga/igridi”)
Sithumele kwi-imeyili yakho. Ngokuqinisekileyo wayeye kwifolda yeposi ye-junk.
Ngendlela, ndandifumene le website kwaye ndiyamangaliswa. Ndisafuneka ndilahleke kuyo, kodwa kubonakala kukuhle.
Andifumani nalapho ndingayikhuphela khona…. Is Iphi le tafile intle kangaka?
Dear into endifuna ukuba zihlahle uququzelelo e MicroStation V8i, kodwa Pilot yam ukubamba izidanga Decimal Lat W89.14298 N13.71391, mna ndimele ukuguqukela XY, i-Excel isifanekiso iifowuni degree, imizuzu nemizuzwana.
Inombolo yeli nqaku inokuguqula kuphela ukusuka kwi-UTM ukuya kwi-Geographic.
UTM idibanisa kwaye
Ziziphi izilungelelwaniso ozifakayo, yintoni ummandla, zeziphi iziphumo ozenzayo, yiliphi ilizwe ongenawo kwaye sihlola ukuze sibone okwenzekayo. Musa ukuba yinto yokuhlukana kweenqununu zamashumi okanye ama-decimals.
Akukho i template kwiiGofumadas njengaleyo ohlala kuyo. Kukho enye kodwa oko kuyenzayo yinto ephilileyo, iguquka ukusuka kwiidridi ukuya kwii-decimals
Ngokuqinisekileyo u-Y ulungelelaniso lubi, kuba ulwahlulo luqala e-Ecuador kwaye xa lufikelela ekuphakameni kwe-El Salvador linani elingaphezu kwesigidi esisodwa. Khangela oko kubonakala ukuba kukho ingxaki.
Ingaba kweli lizwe ukwahluka ubude ngamaqondo ziyahluka phakathi 87 ° kunye 89 ° kunye inkululeko phakathi 13 ° kunye 14 ° yi Central America
Ewe kodwa asikwazi ukuba sithetha ntoni. Uyazi njani ukuba oko kufanele kukunike?
khangela, sebenzisa i converter nokulungelelanisa izidanga imitha kwaye iziphumo kufuneka kumnika sona nezide kwaye lokuphakama ° 89 13 °, kodwa wandinika ° 89 kwaye lokuphakama 2 16 ° ukusetyenziswa indawo emantla kunye nemfuneko ikhweyitha wasentshona ukwazi ukuba yintoni eyenza
kukho i-google ye-heart version evuma ukungena kwiindawo kunye ne-UTM izikhokelo yi-6.2.1.6014 (beta)
Ngokuqinisekileyo, nciphise imitha. Kukho khona.
ok kwaye kukho nantoni na yokufumana imephu yaseVenezuela ebonisa ukuba yiyiphi inqaku apho iindawo okanye iziza ezikhoyo?
Kwezinye iimeko kunokwenzeka ukuba i-download imisa, okanye i-Proxi ukusuka apho udibanisa khona ibhloko yokukhuphela. Nangona kunjalo, ukuba kwenzeka oku, unokwazisa ngeposi.
i-heeeey ihlawula i-dollar ye-2 kwaye ayivumeli ukuba ndilande ithemplate engcono
Ndithetha indawo ye-14 okanye isebenza nayo yonke imimandla
Awukwazi, i-Google Earth ayikwamukeli igalelo le-UTM kwifomathi. Elula kakhulu ukuba nawe wenze inkqubo efana Microstation GIS, gvSIG okanye QGis, yaye ngoko ke kumazwe angaphandle ukuba KML ukulubona Google Earth.
Sawubona Miguel Ngokuphathelele umbuzo wakho:
-Izilungelelwano eziboniswe yiGoogle Earth kunye nabo ubhekisela kuzo zibizwa ngokuba yi-UTM. Le nkqubo ihlula izwekazi kwiindawo ze-60 eziphuma kwi-pole ukuya kwi-pole, zee-6 degrees ubude nganye. Ngale ndlela, zonke ndawo 500,000 njengoko okuyi engundoqo yaye ngaloo ndlela uya kukhula okanye ukunciphisa de afikelele umda wale ndawo, ngoko ukuqhuba Oku iyaphindwa kwindawo nganye kodwa zange negative. E North ndlela, iqala kwi zero ukusuka Ecuador ukuya kwipali esentla kwaye ikhweyitha kumazantsi iqala kwipali ukufumana ku Ecuador.
Le nkqubo ibangela ubunzima kumazwe abandakanyeka indawo ngaphezu kwesinye, kwimeko Colombia phakathi kwimimandla 17, 18 kunye 19. Ukongezwa koko, kunomlinganiselo wokuba nenxalenye enye enyakatho ye-hemisphere kunye nomnye kummandla wasezantsi.
Ngaphezu koko, njengoko ityala ukwazi, ukuthatha imephu Google Earth, ngokukodwa xa isebe Nariño kuba waphawula ukuba uququzelelo ukuba emke entshona ukuya empuma, uyithabathe kwimeko Tumaco, ukuba ibekwe 748650 E, ukuba sibenze uququzelelo ezifanayo ngasempumalanga, ukuba utsalela ingqalelo ukufikelela 833969E kwaye utshintsho kancinci emva ku 166030E. Kukwanjalo kwenzeka Google Earth ukusuka kwi-ikhweyitha ukuya North iqala 0.0, ngoxa IGAC lalo Ukulungelelanisa kwi-ikhweyitha.
Ekupheliseni, unokwenza njani ukuguqulwa kwi-IGAC izilungelelaniso kwiGoogle Earth?
Ndizamile ngamanqaku olawulo lweSizwe I-Cartography yaseVenezuela kwaye inika iziphumo ezifanayo. mbulela
Kufuneka ukuguqula le data W 14 ° 51′ 16.59” YS 90 ° 51′ 50.1” ukuba UTM
i-utm geogra idibanisa i-converter
Umhlobo Oliver, uNOD 32 akhululekile kwiintsuku ezili-30. Ukuba ukhangele iphepha apho ungayithenga khona:
Ndiyicinga ukuba lithetha: Indawo 18, x = 338552 kunye = 9065052 kwisezantsi. Zama kwi template. Uya kuthatha idata
Ndincede NDIFUNA ukuguqula cordenadas UTM A CORDEENADAS Geographic datha SIGFUE NGAYO:
Ndiyifakile idatha kwi-CARTOGRAPHIC COORD CONVERTER ye "Gabriel Ortiz". kodwa ayibuyiseli idatha endiyithelekisa nayo.